रोमाञ्चक यौन–जीवनका लागि दम्पतीले थाहा पाउनुपर्ने १० कुराहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
रोमाञ्चक यौन–जीवनका लागि दम्पतीले थाहा पाउनुपर्ने १० कुराहरु !!
Affectionate couple in bed --- Image by © Laura Doss/Corbis
कुनै पनि व्यक्तिको शारीरिक रुपान्तरणको लागि तपाईंको कामुकताले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । हर्माेनको स्तरमा आउने गिरावटले न्यूरोलोजिकल र परिसञ्चरणको काममा ठूलो असर गर्ने गर्छ । जसले गर्दा योनीको दुखाइ जस्ता यौन समस्याहरु निम्तिने गर्छ ।
२ आफैँलाई समय दिनुहोस्
यदि तपाईंको कुनै पनि प्रयासबाट पनि यौन सम्पर्कमा सन्तुष्टि मिल्दैन भने पनि हार नखानुहोस् । यसको लागि यौन समस्याको कारण कारण निर्धारण गरेर त्यसको प्रंभावकारी उपचार खोज्न सकिन्छ । त्यसैले कहिलै पनि हार मान्नु हुन्न । अनलाइनखबर बाट सभार